'एनआरएन अमेरिका' डुबाउने खलनायकहरु
अन्तत त्यही भयो जे नहुने पर्ने थियो। आज र भोलि हुनु पर्ने एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन स्थगित भयो त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि। अमेरिकी अदालतमा मुद्दा पर्यो, समाजका अगुवाुको पगरी गुथ्ने दर्जन बढी मनुवाहरुको जुँगाको लडाई समाजमा घिनलाग्दो गरी छताछुल्ल भयो। सबैका नाङ्गा तस्बिर देखिए। उनीहरूको समाज प्रतिको कथित चिन्ता पनि उदाङ्गो भयो। एनआरएन अमेरिकाको भविष्यलाई नै दाउमा राखियो।
जे नहुने पर्ने थियो त्यही भयो तर, किन? कसरी? कसका कारणले अनि कसका लागी? यी प्रश्नहरूको उत्तर आआफ्नो सुविधा अनुसार हरेक जिम्मेवारले दिइरहेका छन्। सही लाई सही र गलत लाई गलत भन्ने अति सरल आँट उत्तर दिनेहरुमा देखिएन।
विश्वभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूको एक मात्र साझा सङ्गठन एनआरएनको अमेरिकी शाखा एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनका विषयलाई लिएर सिङ्गो एनआरएन नै तरंगित छ। डालसका युवा व्यवसायी गौरी जोशीले एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन पाइने वा नपाइने भन्ने विषय नै यो झगडाको एक मात्र कारण हो। जोशीका समर्थकहरु यो अधिकारको लडाईु लड्न तम्तयार छन् र अदालतमा मुद्दा समेत दाएर गराएर आफ्नो पक्षमा प्रारम्भिक फैसला गराउन सफल भएका छन्। जोशीका बिरोधिहरु भने संस्थाको नीति नियमको दुहाइ दिँदै उनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने मुडमा छन्। जोशीले टेनिसी राज्य स्थित नक्स चांसेलेरी कोर्टमा एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन समितिका विरुद्ध मुद्दा दाएर गरेर प्राप्त गरेको पहिलो चरणको सफलताले क्रोधित बनेका जोशीका विपक्षीहरू पनि काउन्टर ल सुटु गर्ने मुडमा छन्।
जोशीलाई एनआरएन अमेरिकाको नेतृत्व लिनु छ उनका विरोधीलाई जसरि पनि रोक्नु छ। सिङ्गो एनआरएन अमेरिकाको भविष्यलाई नै दाउमा लगाएर खेलिएको खेलका असली खलनायकहरुको पहिचान आवश्यक छ। को हुन् ती जो समाजसेवाको मुकुण्डोमा आफ्नो अन्तर्निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न तम्सिरहेका छन्?
शेष घले एंड कम्पनी
एनआरएन ग्लोबलका अध्यक्ष शेष घले, एनआरएन ग्लोबलका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा लगाएतको एक झुण्ड जो आगामी अक्टुबरमा सम्पन्न हुने एनआरएन ग्लोबलको नेतृत्वमा आफ्ना मान्छेहरूको बर्चस्व गराउन चाहन्छ। सो निर्वाचनमा अमेरिकाबाट झन्डै दुई सय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र त्यो सङ्ख्या चुनाव जित्नका लागि अति सहयोगी हुनेछ। अमेरिकी एनआरएनको नेतृत्वमा गौरी जोशीले जित्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गए पछि आफ्नो योजनामा खतरा आउने देखि जोशीलाई जसरि पनि रोक्ने दाउमा घले निर्देशित सोनाम लामा लागएतको समूह विगत केही महिना देखि लागेको कसै बाट पनि लुकेको छैन। शेष घले यदि चाहन्थे भने यो विवाद महिना अघि नै सुल्झी सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन।
एनआरएन ग्लोबल (आइसीसी) को विधान अनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हुनका लागि विगत एक कार्यकालमा काम गरेको हुनु पर्छ। त्यही आधार बनाएर निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढायो। न्याकु भन्ने संस्था नै हालको एनआरएन अमेरिका बनेको र सो न्याकमा गौरी जोशीले एक कार्यकाल काम गरेको भन्ने तथ्य सँग कोही विवाद गरिरहेको छैन। समस्या के भने जोशीले काम गरेको जग जाहेर हुँदा हुँदै पनि प्रयाप्त प्रमाणु पेस गर्न सकेनन् र उनलाई निर्वाचन समितिले उम्मेदवारका लागि अयोग्य देख्यो। शेष घलेले यदि चाहेको भए एउटा पत्र लेखि जोशीले काम गरेको इतिहासलाई सहजै प्रमाणित गर्न सक्थे तर त्यसो गरेनन् र विवाद बल्झियो। यो घृणित खेलका एक मुख्य खलनायक घले, लामा र उनीहरूको समूह हो।
आनद विष्ट, विष्णु सुबेदी एंड कम्पनी
एनआरएन अमेरिकाको यो अभिगत बनाउनमा नेपाली काग्रेशको भातृसंघठन जन सम्पर्क समिति अमेरिकाको आन्तरिक कलहको हात छ। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको नचाहिदो खिचातानी ले बिग्रेको एकता विष्णु सुबेदी र आनन्द विष्टको जुँगे लडाइमा पिल्सिदै एनआरएन अमेरिका समेतलाई ग्रहण लाग्यो। आनन्द विष्टको समूहले गौरी जोशीलाई साथ दिएको छ भने सुबेदी समूहले यसको विरोध गरेको छ। जोशीको उम्मेद्वारीको बहानामा उनैको काधमा बन्दुक राखेर यी दुई समूह एक अर्काको अस्तित्वलाई चुनौती दिन चाहन्छन्।
रोचक पक्ष त के भने यो दुवै समूहलाई एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष जो भए पनि कुनै फरक पर्ने छैन नत यिनीहरू जोशी को लागि वा उनका विरुद्धमा लडिरहेका छन्। सतहीरुपमा जे देखिए पनि काग्रेसीहरुको आपसी झगडा नै मुख्य बीज हो यो समस्याको। आनन्द बिस्टलाई जोशीको कुनै मोह छ नत सुबेदीलाई जोशी विरुद्ध पूर्वाग्रह। तर अहिले जोशी कसैको हतियार बनेका छन् त कसैको निशाना। यदि जन सम्पर्क समितिको झगडा यो रूपमा बाहिर आउदैन थियो भने सायद समस्याको समाधान धेरै पहिले भैसक्थ्यो। त्यस अर्थमा यो समूह पनि खलनायकको सूचीमा सामेल हुन्छ।
जोशीको 'हाई कमाण्ड'
गौरी जोशीलाई सघाउने नाममा आआफ्ना स्वार्थ बोकेर लागेको एउटा विशेष समूह छ जसले आफूलाई 'हाई कमाण्डुको पदले विभूषित गरेको छ। केही काग्रेश र एमाले समर्थकहरु, 'सुपर लएरु अनि केही सदाबहार समाजसेवी' को पद धारण गर्न रुचाउनेहरुको यो समूह पनि जोशीलाई जिताउन भन्दा पनि उनका विरोधी डाक्टर केशव पौडेललाई हराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विगत एक वर्ष देखि गौरीको साथ दिइरहेको छ। जोशीलाई चुनाव जिताउने 'ठेक्का' लिएर बसेको यो समूहले गरेको कमजोर तयारी, 'रियालिटी' भन्दा टाढा बसेर आफूलाई पायक पर्ने किसिमको बस्तुस्थितिको परिभाषा र आंकलन, अनि आफ्नो विपक्षीलाई कम्जोर ठान्दै 'ओभर कन्फिडेन्टु सहितको अपरिपक्कता नै आजको अवस्थाको एक कारण हो।
साधारण सदस्यलाई पनि जोशीको बारेमा उत्पन्न विवाद र त्यसको सम्भावित समाधानको उपाय थाह थियो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी आह्वान गर्दा उल्लेख गरेको बुदा नम्बर सातु ले मागेको प्रमाण के हुन सक्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नराखी ओकिल सहितको यो समूहले जोशीलाई ढाडस दिँदै गयो। जोशीको उम्मेद्वारीलाई लिएर निर्वाचन समितिले गरेका केही व्यक्तिगत कुराकानीलाई अतिरन्जित गर्दै मिडियाहरुमा अनावश्यक प्रचारबाजी गर्न पनि यही समूह जिम्मेवार छ।
आइसीसीका महासचिव बद्रि केसीले जोशीको पक्षमा लेखेको पत्र मात्र निर्वाचन समितिका लागि थियो। तर आफ्नो विजय उत्सब झैँ त्यो पत्रका विषयमा निकै हौवा पिटेर आफ्नो विपक्षीलाई निकै साबधान बनायो यो समूहले। यदि यो समूहले आवश्यक पूर्व तयारी प्रयाप्तरुपमा गरेको भए निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पुर्ब नै नगरी विवादको समाधान गर्न सकिने थियो।
एनआरएन अमेरिकाको वर्तमान कार्य समिति
वर्तमान कार्य समितिका मुख्य चार पदाधिकारीहरू नै अहिले आगामी नेतृत्वका लागी लडिरहेका छन्। जोशीको उम्मेद्वारीका विषयमा व्यक्तिगतरुपमा यो सबैलाई उनी योग्य भएको जानकारी छ तर 'प्रमाणु दिनका लागि निर्वाचन समितिले वर्तमान कार्य समितिलाई आग्रह गर्दा यो कार्य समितिले सो पत्र लेख्न सकेन।
पद प्रतिको लालसाले कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारीलाई आफ्नो गरिमा र पदको मर्यादा नै भुल्ने गरी निहुरायो र अधिकांश मौन बसे। टेक्सासका राम पोख्रेल भने यो विषयमा अलि फरक देखिए र ईमान्दारिताको पहिचान दिँदै उनले सार्वजनिक भन्ने हिम्मत गरे र भने 'जोशीलाई चुनाव लड्न दिनु पर्छ। यो कार्य समितिले एउटा पत्र लेखेर यो विवादको समाधान तिन महिना पहिले नै गरी सक्थ्यो तर त्यसो गरेन र आजको अवस्था सृजना भयो। वर्तमान कार्य समितिमा रहेकाहरुमा थोरै पनि नैतिकता बाँकी रहेको भए यथा सम्भव यो विषयलाई समाधान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।'
सुची नै बनाएर चिरफार गर्ने हो भने एनआरएन अमेरिकालाई यो दिन देखाउने खलनायकहरु धेरै छन् , तर, माथि उल्लेखितहरु नै विवादका मुख्य जड हुन्। धेरैलाई निर्वाचन समिति र यसका संयोजक बंदिता दाहाल पनि यो विवादको कारण लाग्न सक्छ तर बिर्सन नमिल्ने तथ्य भने बंदिताले त्यही गरिन जे उनको सामुन्यमा थियो। विवादका सुत्रधारहरुले उनलाई यो परिस्थितिमा पुर्याए। कहिले जोशी पक्षले उनको विरोध गरेको छ भने कहिले विपक्षीले।
उनको कामको प्रकृति कसैलाई खुसी बनाउने होइन। उम्म्द्वारी आह्वान गर्दा उल्लेख गरिएको बुँदा नम्बर सातले प्रस्ट रूपमा एक कार्यकाल काम गरेको प्रमाण मागेको छ र त्यो प्रमाण दिनु नै जोशीको पहिलो कर्तव्य थियो। हाल टेनिसी कोर्टले दिएको आदेशलाई बंदिताले कसरि व्याख्या गर्छिन भन्ने तथ्यले नै उनी नायक या खलनायक भन्ने निर्धारण गर्ने छ।
बंदितालाई भगवान् श्री पशुपतिनाथले उचित निर्णय लिने साहस प्रदान गरुन र यो विवाद सदा सदाका लागि अन्त्य होस्। शुभकामना।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २८, २०७४, ११:३९:००